Barclays Bank oo joojinaya adeegga xawilaadaha - BBC News Somali
Barclays Bank oo joojinaya adeegga xawilaadaha
27 Juunyo 2013
Image caption Wakiillo ka socda xawiladdaha Soomaaliya oo ka hadlayay xayiraad uu Bank-ga Barclays ee UK uu saaray diridda lacagaha. (Biddix) Miciim Cali (Iftin Express), Maxamed Xassan Ciise (Amal Express), Maxamed Aadan Cabdi Saalimiin (Amana Express).
Barclays Bank ee dalka UK, ayaa ku dhawaaqay in uu joojinayo adeegga xawilaadaha oo adeegsan jiay Bank-ga. Ilaa 250 hay'adood oo ka ganacsada xawilaadaha oo ay ka mid yihiin ilaa labaatan hay'adood oo Soomaali ah ayaa xayiraaddan ay saamaynaysaa.
Hadaba, waxaanu dhibaatadan kala sheekaysannay qaar ka mid ah xawilaadaha Soomaalida ee ka howlgala dalkan UK.
Cabdiraxmaan Koronto ayaa waydiiyay baaxadda dhibaatada ka dhalan karta xayiraadda uu soo rogay Bank-ga Wakiillo ka socda urur ay xawilaaduhu ku midoobeen oo la yiraahdo SOMSA (Somali Money Services Association).